Azonao atoro ahy ve ny fitaovam-pikarohana am-panandramana Amazon mba hividianana prix?
Na dia miaraka amin'ny vokatra tadiavina tanteraka aza, dia saika tsy azo atao ny manomboka mitazona izany tsenam-barotra izany any Amazon. Midika izany fa ny vokatra sy ny lisitrao dia tsy afaka manampy anao hahazo an'io fifaninanana milatsaka hofidiana io, raha toa ianao ka mahavita manamarina ny vidin'ny vidin-tsolika ary mijanona ho vonona amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro na ny fihenam-bidy ataon'ireo mpifaninana aminao, ohatra rehefa manao fampielezan-kevitra momba ny fampielezan-kevitra amin'ny sasany hot items. Eto dia tsy maintsy ilaina ny fitaovana ampiasaina manokana amin'ny Amazon amin'ny fanaraha-maso ny vidin'ny vidiny ary mijanona foana amin'ny fanolorana, ary koa ny fampandrenesana sy ny fampandrenesana. Ireto misy fitaovana tsara sy rafitra an-tserasera mba hiatrehana ny olana momba ny vidin'ny tranokala misotro ronono ho anao sy ho an'ny rehetra.
Safidy lehibe ho an'ny mpivarotra ecommerce ary na dia manam-pahaizana momba ny varotra dizitaly aza. Azo ampiasaina ao amin'ny Amazon ho toy ny fitaovan'ny fikarohana amin'ny fanadihadiana amin'ny vidiny mirary sy ny tanjona amin'ny fanatsarana ny vidin'ny vokatra. Raha tsorina, ity fitaovana ity dia manatsara ny zava-misy - afaka manampy anao hanondro ny politikam-bola hividianana ny vokatra mety hitrandraka amin'ny fivarotana, ary hitazona anao ny maridrefana ara-pahasalamana amin'ny fotoana iray ihany. Ny Seller Logic koa dia mety ho lasa fototra mafy orina ho an'ireo tetik'ady ara-barotra manaraka eo amin'ny Amazon, toy ny Buy Box, Position, Sales, ary ny fomba fanao mitovy amin'ny vidin'ny mpanohitra akaiky anao.
Ny fitaovam-pikarohana hafa azonao azonao ampiasaina ho an'ny fanadihadihana amin'ny vidiny mba hamolavolanao ny paikadinao manokana eo amin'ny sehatra tsy miankina. Manamora ny tenanao amin'ny fomba fanehoana maodely ary manjakazaka amin'ny tontolon'ny fifaninanana am-panahin'i Amazona amin'ny fomba mahalaza ny vidin'ny mivarotra. Misy ihany koa singa miavaka amin'ny alàlan'ny Appeagle, satria ity fitaovana ity dia mety ho tombony amin'ny tsena hafa ihany koa, toa an'i Walmart.
Keepa dia manohana ny vidin'ny fikarohana sy ny fitsikilovana manerantany, mandrakotra ny ampahatelon'ny firenena samihafa. Anisan'ireo karazana fototra hafa, ity fitaovana fikarohana am-pitadiavana amazonin'i Amazon ity dia toa tena manampy tokoa amin'ny famokarana sarimihetsika maimaim-poana, vidin'ny vidiny na fampandrenesana momba ny fampahafantarana, antontan-taratasim-panazavana malalaka azo raisina ao amin'ny tranokalako, haingana manamarina ny antsipiriany farany ny fironana amin'ny vidin'ny vidiny, ary ny fanadihadiana mora sy mora azo indrindra amin'ny mpivarotra am-pahombiazana amin'ny Amazon.
Ity no safidy farany tiako hampisehoana anareo anio. Ny RepricerExpress dia mampifandray ny tsara indrindra amin'ny automation ara-barotra mba hanompo anao amin'ny Amazon ho toy ny fitaovan'ny fikarohana sy ny rindrambaiko fanatsarana ny vidiny - ny iray amin'ny iray. Araka ny hevitr'ireo mpamolavola, ity vahaolana malalaka ity dia miantoka fotsiny amin'ny angon-drakitra farany mba hanampy ny lisitry ny vokatrao miaraka amin'ny fandefasana ny bokotra Buy, ary mety hitondra ny lisitry ny vokatrao ao amin'ny Boky More Choices. Nahita tombony aho tamin'ny famelezana ny saran'ny mpanohitra ahy noho ny habetsaham-bidy manokana, manao fifaninanana tsy tapaka miaraka amin'ireo sarimihetsika farany indrindra napetrak'ireo mpivarotra ambony tao Amazona, ary mba hanatsara ny zava-mitranga amin'ny fanilihana an-tsokosoko ho an'ny mpifaninana sasany Source .